I-Starbucks: Ukunyuka kwamaxabiso kunye nokuNcitshiswa kweBrand | Martech Zone
I-Starbucks: Ukunyuka kwamaxabiso kunye nokuNcitshiswa kweBrand
NgoLwesibini, Agasti 5, 2008 NgoLwesibini, Juni 23, 2015 Douglas Karr
I-United States ayizange iqonde kakuhle ukuba yeyiphi ikofu nako incasa efana. Iigrafu zekhofi zazinencasa yeetshiphusi ixesha elide ezinceda ukwandisa inzuzo yeenkampani zekofu. Ndinomhlobo wam owayesebenza kumzi-mveliso wokupakisha owayesebenza kwizixhobo ezazizalisa zitywina izikhongozeli zekofu. Undixelele ukuba batshintshe ii-brand ubusuku bonke, kodwa zange bazitshintshe iimbotyi. Sonke sasondliwa ngokufana, sizifihle kwiitoti zekofu ezahlukeneyo.
Emva koko kwafika iKofu enkulu
Malunga nexesha endaqala ngalo ukunikela ingqalelo kwindlela ikofu yam engcamle ngayo malunga nexesha endalifumana ngalo INorfolk Coffee kunye neNkampani yeTi. Kude kube namhla ndiza kukuxelela ukuba akukho nto ifana nokufumana iimbotyi ezintsha ezigcadiweyo ngokuthe ngqo eziko.
Ukuba uyicinga njengamaza amatsha, indawo yanamhlanje yee-snobs zokudibana kunye ne-hobnob, ngekhe uqhubeke nenyaniso. Ngaphakathi kwakukhangeleka ngathi ngumzi mveliso oxhatshazwayo… kwakukho ukutyabeka ikofu nothuli lwamandongomane kuyo yonke into oyijongileyo. Ungene nje, wayalela ibhegi yakho yamhlaba, waphuma. Andinalwazi lokuba zivela phi iimbotyi, kodwa zazisoyikeka. Abanini bandifundise malunga nabenzi bekhofi abatsha ngaphandle ngaphandle kwezitshisi kunye neekharafi ezigqunyiweyo. Akukho kofu itshisiweyo. Mmmm.
Emva koko kwafika i-Starbucks
Malunga neli xesha, ndafudukela eDenver ndaza ndashiya into endayifumeneyo entsha. E-Denver, ndakhangela i-roasters zekofu kodwa zazingafani. I-Starbucks yayifikile edolophini, nangona kunjalo, kwaye ndafumana incasa yeembotyi ezitshileyo zeebhokhwe. Andiqondi ukuba ndakhe ndaziqhela iindleko okanye incasa yezo mbotyi, nangona! Ndichithe imali ephindwe kalishumi kwimali yekofu kunangaphambili!
Ndizonwabele ezivenkileni. Ndikuthandile ukuhlala phantsi, ukungena kwi-wireless (ngaphambi kokuba babize), nokwenza umsebenzi. Babedlala umculo opholileyo apho (ngaphambi kokuba bayithengise).
Emva koko kwafika izihlalo ezinzima
Ukuxhonywa kwi-Starbucks xa beqala ukuvula kwakumnandi kakhulu. Izitulo ezitofotofo kuyo yonke indawo, ziyenza indawo entle yokubamba iintlanganiso ezingalunganga. Izitulo ezimnandi zamema abantu ukuba bachithe ixesha elininzi e-Starbucks, nangona kunjalo. Ndifundile ukuba indawo ezininzi zentengiso zibeka izihlalo ezinzima ukuze abantu bangahlali ixesha elide. I-Starbucks itshintshele kwiivenkile ezinkulu nakwizitulo ezomeleleyo ezinesihlalo esihle sokujikeleza.
Emva koko kweza ii-Auto-Shots
Ndikhumbula imiqondiso emikhulu yokubulisa kuwe kwiibhakethi:
UBarista wakho nguJane
UJane unokuba nokuqaqamba kweenwele eziluhlaza kunye nokubhoboza kwindawo ezimbalwa, kodwa njengoko wayetsala umpu, wabukela njengoko wayesenza ubugcisa bakhe. Uya kuxoxa ngezinto ozithandayo nangazithandiyo kukhetho lwesiselo kwaye enze izindululo malunga nesicelo sakhe samava. Uziva upholile ngokubakho nje kwaye unikwe ingqalelo. Uziva ukhethekile.
Kodwa imigca ikhule ngakumbi kwaye umgca wendibano kwafuneka ukhule ngokukuko. Oomatshini abatsha baziswa kuloo mhlaba ngokuzenzekelayo, bapakisha kwaye bathululela lo mbumbulu. Umlingo ubungekho ... akukho ukungafezeki, akukho shoti ithatha ixesha elide, imfutshane kakhulu okanye inezizathu ezininzi. Okubi nangakumbi kukuba, i-baristas yaphulukana nolwazi lwabo lobugcisa. IiBarista zazingezogcisa zingaphantsi komntu owayejija iburger kwiKing Burger King.
Emva koko kwafika ukuThengisa
Njengoko wawumi emgceni, ngoku wawungqongwe ziingxowa zeembotyi, iikomityi, iiggs, izikhongozeli ezifakiweyo, iitshokholethi, abenzi bekhofi, oomatshini be-espresso, iiCD zomculo, amaphephandaba… Ivenkile yayiqala ukubonakala njengevenkile kune indawo yesithathu, indawo kude nekhaya kunye nomsebenzi apho ndifuna ukuchitha ixesha.
Emva koko kwafika iDrive-through
Imigca yayinde kakhulu ukuba iqhubeke nencoko. Ii-baristas bezixakeke kakhulu ukuba zikwazi. Utshintsho lweebaristas ezintsha zeza zahamba, i "Barista yakho" ishiywe ingenanto. Ukulwa nemigca, i-drive-through yafakwa. Kukulungele ngakumbi. Iyakhawuleza. Inzuzo enkulu. Abathengi abaninzi.
Kwakungekho khetho lwenkcitho ngaphandle kwesiqhelo eyenzelwe ukuthanda kwakho. Eqhelekileyo isiselo esicetyiswayo sosuku okanye i-upsell kwikhekhe yekofu.
Hayi enkosi. Ukungatyebisi, ukungabethi whip, grande mocha nceda.
Iidola ezisibhozo, ukuqhuba ujikeleze.
Ndimamele unomathotholo njengoko bendisiya ndize ndibanike imali yam kunye nokuya emsebenzini. Akukho mibuliso, akukho ngxoxo yemozulu. Mna kunye nemoto yam. Umlingo wawungekho. I-Starbucks, amava njengoko ndandisazi njalo, ifile.
Inyani yile yokuba andiyazi ukuba bendikhe ndaya e Starbucks yekofu. O-bendifuna ukulungiswa kwam njengaye wonke umntu, kodwa bendithandana nophawu, isitayile, ubuntu bendlu yekofu. Ndandikuthanda ukuya apho kuba ndiziva ndibalulekile. Kwaye xa ndihlawule iidola ezintlanu ngesiselo esikhethekileyo, ndaziva ndibaluleke ngakumbi.
Kwenye indawo apha endleleni, i-Starbucks yaqala ukucheba okhethekileyo ngenjongo yokufumana inzuzo kunye nokusebenza kakuhle. Bayeka ukwenza me ndiziva ndibalulekile. Bayeka ukwenza me ndiziva ndikhethekile. Bayeka ukuba ngabakhethekileyo. I-Starbucks libali elimangalisayo-bayinyusa ixabiso lesiselo esiqhelekileyo kwaye basifumana sonke. Kodwa abakwazanga ukusigcina. Ukukhula, inzuzo kunye nokusebenza kakuhle kwathatha indawo kwaye ekugqibeleni kwaphanzisa yonke into ngaphandle kweevenkile ezazingafani.
Isimanga kukuba i-Starbucks izithathele ingqalelo, akukho mntu wumbi uyenzileyo. Akukho mntu ukhuphisana naye wangena wabacel 'umngeni. Nini Schultz ubuyile ngoJanuwari, bendinethemba elikhulu. Oh Kulungile.
Emva koko kwafika izaphulelo
Namhlanje, i-Starbucks iqale ukunikezela nge Isiselo esiyi- $ 2 emva kwemini ukuba ungenisa irisithi ukususela kusasa. Ndiyeke isidlo sasemini e-Starbucks namhlanje kwaye ndafumana irisithi yam enesitampu ukuba ndingene kamva. Andizange ndiyenze.
Ndicinga ukuba siyibethile isikhonkwane entlokoUtshilo u-Brad Stevens, usekela-mongameli kulawulo lobudlelwane babathengi. Kulula ukuba i-baristas iphumeze kwaye kulula ukuba abathengi bayiqonde.
Elula. Ewe, yiyo impendulo. Ndifuna ukuhlawula ngokulula.
IIMHO, Ndicinga ukuba i-Starbucks ibethe umdlalo wokugqibela isikhonkwane ebhokisini. Azisekho zikhethekileyo ngokwaneleyo ukuhlawulisa i- $ 5 ngesiselo, ngoku babhenela ekunciphiseni eyona mveliso inkulu bayenzileyo. Lusuku olubuhlungu lweStarbucks.
Emva koko kwafika iNdlu yeKofu yaBucala
Ndibhala oku ndikwindlu yam yekofu endiyithandayo emhlabeni, eyivenkile yabucala. Ngobu busuku, i-barista Cassie yam idibanise isiraphu ye-raspberry yaseTaliyane kum isekwe kwingxoxo yezinto endizithandayo nangazithandiyo (ukuba uyazi kakuhle). Kwaye u-Alayna undenzele isandwich yenyama yenkomo eshushu eshushu kwi-bagel (hayi kwimenyu).
Ndibhale yonke le posi kwi-simahla engenazingcingo kwaye ndahlala ixesha kwisitulo esikhulu se-ol 'comfy swivel. U-Cassy no-Alayna bayancokola, ngamagama, kunye nabathengi kunye nokugalela iifoto (kunye nokuziphindaphinda ukuba zide kakhulu okanye zimfutshane kakhulu), bazipakisha ngononophelo ngokusekwe kubumanzi.
Kukho ibali elibaluleke kangaka apha kwezinye iinkampani. Awunakho ukuqhubeka nokuhlawulisa "okhethekileyo" emva koko ujike ujonge kude kuyo yonke into ekhethekileyo. I-Starbucks ayikhange iyiphungule ikofu yasemva kwemini ngale mvakwemini, balixabisile igama labo nangakumbi.
Lusuku olubuhlungu Starbucks, kodwa lusuku oluhle lwevenkile ezimeleyo yekofu. Khange ndibuye umva ndiyokufumana isiselo esiyi- $ 2 ngale njikalanga.
tags: baristauhloboukwehla kweempawu zebrendiIxabiso lentengokofuIvenkileinkwenkwezi
Enkosi ngokulunga kubahlobo!
Amashishini amatsha "Amakhadi" alapha!
Agasti 6, 2008 kwi-7: 28 AM
Ndiyazi ukuba uthetha ukuthini, ndazama i-starbucks "espresso", kuba ndandicinga ukuba akukho ndlela yokuba ikhonkco elikhulu, eliyaziwayo linokuba libi. Kwaye kwaba njalo. Kodwa ndiya kwindawo entle eSydney, apho baqhotsa iimbotyi kwi-cafe, kwaye bandazi ngegama. Ukucima.
Aug 12, 2008 ngo-5:02 PM
NdiyiBarista phantse iminyaka elishumi. Ndikhe ndasebenza kwenye yeevenkile zekofu zibalaseleyo endakha ndazifumana, kwaye ndiyibonile into eyenza ukuba ivenkile yekofu ibe ntle. Ndasebenza kwi-Starbucks malunga neenyanga ezimbini ngehlobo elinye, ndingazi nto ngayo. I ayenayo ukuyeka loo msebenzi. Yonke intwana yobuchule endiyifumene kumava am njengoBaritsa yaphuma ngefestile xa ndinxiba lafaskoti. Umsebenzi wam wawungenanto yakwenza nekofu (eyayimanyumnyezi kunjalo). Ndingathi malunga nama-90% omsebenzi, mihla le, unento yokwenza nokuthengisa kunye “nokujongeka” kuxakekile.
Andazi ukuba kutheni nabani na esiya kwi-Starbucks ngaphandle kokuba abazi ngcono. Kukho iivenkile ezincinci zekofu zabucala ezinetyala lento enye nangona kunjalo. Apho ndihlala khona, akukho nendawo enye yokufumana ikomityi yekofu efanelekileyo.
Agasti 6, 2008 kwi-9: 11 AM
Ndifumene eso sipho sinye nge-imeyile kwaye kwafuneka ndiyeke ukucinga ukuba ndakhe ndaya eStarbucks kabini ngosuku olunye.
Aug 6, 2008 ngo-12:24 PM
Ndivumelana ngokupheleleyo nenkcazo malunga nokuthengiswa kweStarbucks. Ndiyakholelwa ukuba uninzi lwabathengi phaya balonwabele "amava" e-Starbucks, hayi ikofu. Okumangalisayo kukuba baye banikela ebantwini ngokukhawuleza kangangokuba kufuneka uye kwenye indawo ukuze ufumane loo mava ngoku.
Andikazami iNdebe yeBhontshisi okwangoku, kodwa kutshanje ndiyeke yiNkampani yeKofu yeMonon. Ndincoma kakhulu ukubanika ukudubula ukuba ukhe ukwindawo ebanzi yeRipple.
Icawa yaseDim Sum
Aug 6, 2008 ngo-12:44 PM
Sele ndiza kuthengisa izabelo zam kwi-Starbucks. Andiqondi ukuba banokuchacha. Banokuba ne-brand equity, kodwa xa beqala ukuvala iivenkile ezingamawaka ambalwa, unokubona iqamza ligqabhukile.
Ngoku ndisosa ikofu yam ekhaya. Kutshiphu kwaye kumnandi.
Aug 6, 2008 ngo-2:40 PM
Bendikade ndisebenzela iStarbucks… Ngoku andisangeni kuzo. Ndikhetha ukutyalwa kweKofu apho unokuodola nantoni na ngokuthanda kwakho kwaye ii-baristas ziyayazi into abathetha ngayo, njengoko kufanele! Nabo banamacingo asimahla, iindawo ezininzi ezitofotofo zokuzipakisha, kunye nevenkile entle ye-ayisikrimu esecaleni komnyango. Yimeko yokuphumelela-win-win.
Aug 6, 2008 ngo-3:33 PM
Ndingumnini wevenkile encinci yekofu ezimeleyo kwidolophu encinci (Dillard, GA). Ndinganika abathengi bam ingqalelo abayifunayo, (okanye imfihlo) andinangxaki ukuba bahlala kwiWiFi imini yonke kwikomityi enye yekofu, ndilungisa iiodolo ezikhethekileyo kanye ngendlela abazifuna ngayo, kwaye bayabuya. ngaphaya ngaphaya! Isimanga esikhulu, eh? Kweli shishini, njengakuwo onke amashishini, inkonzo YIYO YONKE INTO!!!!
Aug 10, 2008 ngo-4:50 PM
Ubethe isikhonkwane kwibhokisi ye-Starbuck kanye entloko. Akusekho ubuntu apho kwakukhe kwakho. Akusekho nkonzo njengoko kwakunjalo ngaphambili. Endaweni yokuvula ibhiliyoni yeevenkile, ngebenze imali eninzi nje ngokwenza ezinye zazo zibe nkulu, kunye nabasebenzi. Bacinga 'ukuhuka' ikofu ekhobokisayo, kodwa babaleka bangena emhlabeni ngokuthatha yonke into eyayibenza bakhetheke. Ngaba ufuna abathengi? Baphandle!! Kodwa kuya kufuneka unikeze into ekungekho mntu wumbi unayo, kwaye ubuncinci wenze ngathi ngabona mthengi ubalaseleyo! Uya kuphumelela logama nje ucula i-manta…..inkonzo YIYO yonke into.
Aug 6, 2008 ngo-6:46 PM
Inqaku elikhulu. Ngenene "ubethe isikhonkwane entloko"!! Ndikhetha kakhulu ukuya kwizindlu ezincinci zekofu zabucala. Badla ngokuba banzi kwaye banika isidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa.
Kukho ivenkile entle ngokwenene eMunising, eMichigan enevenkile yeencwadi encanyathiselwe. Ungena, ubeke iodolo yakho, kwaye ungakhangela kwiishelufa zeencwadi ngelixa ulindile.
Aug 6, 2008 ngo-9:29 PM
Ndisuka kwinkcubeko apho ukusela ikofu kuyinto enkulu, uye kumakhulu eevenkile zekofu, u-odole iCapuccino, iEspresso okanye iMacchiato ngemali engaphantsi kwebhaki, ndithetha ikofu esemgangathweni, akukho fancy shmanzy ebizwa iziselo ezifuna Inkqubo yeRosetta Stone yokufunda ulwimi.
Apha e-Arizona, i-Starbucks ikuyo yonke i-strip mall, ivenkile yegrosari nakuyo nayiphi na into enendawo yokupaka. Ndizifumana ndimisa yonke intsasa ukuze ndifumane ikofu ende kunye noomama bebhola ekhatywayo bathengela iintsana zabo kunye nabantwana isidlo sakusasa.
I-Starbucks Coffee ayinancasa engaguqukiyo, inyani incasa imbi kakhulu ngaphandle kokuba ufumana i-5$ Mocha Cappu? ngeKarmele into.
inokuba liqhinga layo lokuthengisa ukungcamla ikofu embi eyeliweyo ukuze ukwazi ukunyusela kwisiselo esiyi-$5, hayi ke ungalibali isandwich yebhakoni enamafutha asimahla… intsha.
Douglas, enkosi ngomnxeba wokuvuka
Aug 6, 2008 ngo-9:33 PM
Undikhohlisile yonke indlela ngeposi yakho. Ubhalo oluhle. Ndisebenza kuyilo lwewebhu kwibhanki enkulu, kwaye ndibona uninzi lokuthotywa kwexabiso lophawu oluhambelanayo. Ndiza kuthumela oku koogxa.
Aug 6, 2008 ngo-11:26 PM
Enkosi kakhulu, Eric!
Agasti 7, 2008 kwi-3: 09 AM
Ndiphantse ndingaze ndiye e-Starbucks kuba andizange ndakhe ndasela ikofu kwaye kutheni ndihlawulela i-wifi xa isimahla kwenye indawo?
Kodwa ngokunyanisekileyo ndicinga ukuba ingxaki ziimarike zoluntu. Abatyali-mali bahlala befuna ukukhula kwaye bengakhathali malunga neyona nto incinci ikhethekileyo oyifunayo kwiinkampani ezinesitokhwe sabo. Ukuba isitokhwe sabo asikhuli kwixabiso elikhulu kune-S&P baxosha ulawulo kwaye bakhuphe amagqwetha.
Ingxaki kukuba xa ufikelela kwinqanaba elithile awukwazi ukuqhubeka ukhula ngesantya esifanayo. Ngesabelo semarike ye-95% uza kufumana phi ukukhula kwe-10%? Ngoko ulawulo luqala ukusika iikona, ukucheba iindleko, ukufumana i-cheeser kunye neendlela zayo. Kwaye kuyinyani ngakumbi ukuba umseki kunye/okanye neqela lolawulo elineethos eziphumeleleyo akasekho kwi-helm (jonga nje i-Apple ngexesha leentsuku zikaJohn Sculley.)
Ke ngokwenyani ayikhange ibeyi-Starbucks ezibulalayo, ibiyindalo yerhamncwa leemarike zikawonke-wonke apho abatyali-mali baqhawule umtshato ngokupheleleyo nakuphi na ukubandakanyeka kwimisebenzi yenkampani kwaye bafuna nje ngaphezulu, ngaphezulu, ngaphezulu.
Kwanele ukwenza unongxowankulu ofuna ukuhlala bucala.
Aug 7, 2008 ngo-3:15 PM
Wavuma uMike. Umboniso bhanyabhanya omnandi (onezinto ezishiyeke kakhulu kumbindi kodwa ndisawonwabele). IQumrhu. Umyalezo obalulekileyo emva komboniso bhanyabhanya kukuba iiNkampani ziphila, izigqeba eziphefumlayo ezikhula ngenzuzo kuphela. Akukho nto ilungileyo okanye ingalunganga kwishishini, ingeniso kuphela okanye engenangeniso. Yinto eyoyikisayo leyo kuba iphantse yagwetyelwa ukusilela umthengi!
Agasti 7, 2008 kwi-8: 35 AM
Ndivumelana no-Eric, le ibiyiposti yebhlog ebhalwe kakuhle kwaye ebandakanyekayo enenqaku elifanelekileyo. Into endifuna ukuyazi malunga nokuba kutheni i-Starbucks ikhe yavuka kwasekuqaleni… ngaba abantu abanqwenela ukuziva bekhethekile ukuba kufuneka bahlawule (kakhulu!) hayi ikofu, kodwa ukuhoya umntu owenza ikofu? Ngaba izinto ozithandayo kunye nezingathandwayo zibaluleke kakhulu kangangokuba kufuneka zimelwe kwikofu yakho? Ndichithe nje iveki elwandle noBawozala wam kwaye wayesenza eyona ikofu imbi qho kusasa (Chock Full o'Nuts, kutheni ubiza ikofu?) kwezona zintle ndakhe ndanazo. Chitha ixesha kunye nemali kubahlobo kunye nosapho, baya kukwenza uzive ukhethekile.
Aug 7, 2008 ngo-3:12 PM
Inkcazo enkulu kwaye ndiyavuma. Kukho incwadi apho uSchultz ethetha malunga nezindlu zekofu zibe 'yindawo yesithathu'. Yindawo apho sidibana nabahlobo abangaphandle komsebenzi nangaphandle kwekhaya lethu. Yayikade iyibhari yendawo okanye indawo yokusela apho yenzeka khona oku, kodwa iStarbucks yayithatha loo nto.
Amava am are nabahlobo kunye nosapho – kodwa kaninzi iba kwindawo efudumeleyo kude nekhaya enika iimvakalelo ezinamandla. Sisezindlini zethu nasemsebenzini wethu yonke imihla… sidinga enye indawo esingaya kuyo. Ixesha elide, le ndawo yayiyi-Starbucks.
Aug 7, 2008 ngo-12:12 PM
Kwaye awuyazi ukuba kunzima kangakanani na ukuba i-barista yezobugcisa yenze utshintsho olukhulu (ngenxa "yoqoqosho") ukusuka kwi-coffeshop yasekhaya apho anokuba neenwele eziluhlaza, ukugqobhoza, kunye nobugcisa obugqibeleleyo kwi-automated, corporate. -ihlabathi lerobhothi leStarbucks… Liyafunxa.
Aug 7, 2008 ngo-2:39 PM
Ndicinga ukuba umsinga uyatshintsha kwaye ndijonge phambili ekufumaneni i-maestro njengokuba undigalela ngokudubula ngenye imini!
Aug 7, 2008 ngo-1:03 PM
Hayi. Uhlala e-Indianapolis. Andizange ndiye kwiNdebe yeBhontshisi ixesha elide.
Agasti 8, 2008 kwi-11: 06 AM
andizange ndaya kwi-starbucks. ithemba lokufa ndingazange ndibenayo i-$ 5 1,000 yesiselo sekofu yekhalori evela kwi-starbucks.
ndisela ikofu. mnyama. I-yuban ibonakala ilungile ngokwaneleyo kwivenkile yegrosari. kwaye imbiza ukusuka kusasa ilungile nangaliphi na ixesha emini xa uyifudumeza kwakhona kwi microwave.
Ndicinga ukufumana umenzi wekofu we-french. leyo iya kuba yimini xa nam ndingumntu othanda ikofu.
Aug 8, 2008 ngo-2:47 PM
Kunye nokuba sesidlangalaleni, yinxalenye yetekhnoloji ephezulu/yokuchukumisa okuphezulu. Kwaye luphawu lokuba uluntu lokwenyani lubalulekile kangakanani na ebantwini. Abathengi bethu e-Rubicon bafuna unxibelelwano kunye neengcebiso kunye ne-smarts kunye nendlela yokusebenza xa besebenza nathi.
Nantsi into endiyithathayo kuluntu – http://tinyurl.com/58skzn
Aug 8, 2008 ngo-2:49 PM
IPosi enkulu. Oku kuye kwaguquka kwaba yenye yeeblogi zam endizithandayo ukufunda!
Ndiya kuphela kwi-Starbucks xa ndilibele ukuseta imbiza yekofu kubusuku obungaphambili. I-drive thru line ilula emsebenzini ekuseni. Into enye onokuyikhankanya malunga ne-wifi yasimahla kukuba ayizizo zonke i-Starbucks ezinayo. Ndiyile kwiWifi kwenye yendlela kwiveki ephelileyo kwaye ndidanile kakhulu. Ndiyakholelwa ukuba i-Starbucks yenye yeenkampani ezininzi eziye zaphulukana nendlela yazo ngelixa zikhula ngokukhawuleza.
Ngoku baqhelekile nje.
Aug 8, 2008 ngo-4:28 PM
Lixabise ukunconywa, Kyle!
Agasti 10, 2008 kwi-1: 42 AM
Inqaku elimangalisayo. Kukho isifundo esinzulu nesithobisayo kule nto kuwo onke amashishini afuna ukuqhubeka ekhula ngokukhawuleza nangokukhawuleza…..etyebile kwaye atyebe ngakumbi. Yayiyincoko emnandi itonite kwindebe yeembotyi. Bendingazi, ukuba imibuzo yam kwizinto zeWebhu iya kundiguqulela kulwazi olulungileyo lokwenyani. Enkosi.
Bonani ngeenxa zonke.
Aug 10, 2008 ngo-11:48 PM
Unyanisile ngokupheleleyo. Andizange ndibe ngumlandeli we-Starbucks kwasekuqaleni. Ngexesha lokufika komntu eTerre Haute, yayisele ilityathanga eliphambeneyo. Uhlala useTerre Haute, ubethe iCoffee Grounds okanye iJava Haute. Zombini zisengabanini bendawo kwaye zenza isihogo esinye sekofu engafezekanga. Nangona kunjalo, ndikubonile ukurhweba kwezi zibini. Bobabini bafuna ukukhuphisana ne-Starbucks kwinqanaba elithile kwaye andibasoli. Kukho iirandi ezintathu apha ngoku ngokuchasene mhlawumbi neevenkile ezine zekofu zasekuhlaleni. Leyo yipayi encinci yokunqunqa.
Aug 11, 2008 ngo-11:19 PM
Ifana nebhendi yakho oyithandayo. Ekuqaleni, uyathanda ukubabona bedlala kuba bedlala kwindawo onokuthi uye kuyo uyonwabele nabahlobo kunye neziselo kwaye badlale umculo omnandi. Kuvakala ngathi bakwenzela wena nje umboniso. Emva koko bafumana ukupapashwa okuncinci kwaye uyonwabile kuba banevidiyo yomculo kwaye bathengise ii-albhamu ezimbalwa. Emva koko iyanya ngenxa yokuba iingoma zabo zibhalwa ngokubambisana ngabavelisi abakhulu kwaye badlala amabala amakhulu apho isandi sibi kwaye indawo yokupaka i-brisk 5 yeekhilomitha ukuya kwindawo. Yonke into elungileyo iyakhawuleza… yonwabele ngelixa unako!
Agasti 12, 2008 kwi-7: 26 AM
Inqaku lakho lilungile kanye kuloo ndawo. Akusekho mava e-Starbucks, kwaye andizange ndizithande iimbotyi ezitshisiweyo ukuqala.
Ke mhlawumbi ivenkile yekofu ekhaliphileyo yasekhaya iya kuvula kwenye yeendawo iStarbucks iphuma kuzo, kwaye ibabonise ukuba makwenziwe njani!
Aug 12, 2008 ngo-1:41 PM
Nam ndiyazithanda “iivenkile zekofu yokwenyani” (iStarbucks, kum, ayifaneleki). Ndihlala kwiindawo ezininzi…zonke zibonelela ngoRhwebo oluQinisekisiweyo oluLungileyo, ikofu ekhuliswe ngomthunzi. Kukho into ephantse ibe ngummangaliso malunga nokuzingqongileyo kunye nenkampani enkulu, ikofu enkulu (leyo ixabisa ngaphezulu kwamaxabiso KWAYE ayiwatshabalalisi amahlathi ashinyeneyo KWAYE ixhasa abalimi), kwaye ingenazingcingo…ngelixa uhleli kwisitulo esidala kodwa esitofotofo…LIZULU!
Agasti 13, 2008 kwi-5: 26 AM
e-US ndandidla ngokusela ikofu kuphela kwi-Starbucks. Ndiyawuthanda umoya
Agasti 13, 2008 kwi-11: 13 AM
Ewe, andizange ndiyithande ngokwenene i-Starbucks, kodwa ibingcono kakhulu ngaphambili - nangona iivenkile zaseMassachusetts zonke zibonakala ngendlela okhumbula ngayo. Nokuba yeyiphi na indlela, ndicinga ukuba iyanceda ukugcina iivenkile ezincinci, zibuthathaka njengoko zihlala zinjalo.
Aug 13, 2008 ngo-11:54 PM
Ndisuka eWashington State, umhlaba weevenkile zekofu ezi-5 kwikona nganye. Umnqweno wabo omtsha kwiindawo ezincinci yiWoods Coffee shop. Baneebhedi ezitofotofo ngakwindawo yomlilo evusiweyo kunye neqela elikhulu lemidlalo yebhodi. Kukho iibhendi ezibukhoma ngeempelaveki kwaye ewe unokwenza umsebenzi wakho apho.
I-Starbucks ayisekho phezulu, ilungele ngakumbi. Kungekudala ukulungeleka kwabo kuya kunxiba ngokupheleleyo. Khange ndiyindwendwele i-Starbucks kwiinyanga. Andikwazi ukumelana neziselo zabo eziziphumo kunye nokuya kwabo kakubi. Akukho mntu ufuna ikofu yokwenyani… Bangenza ngcono ukuba bayavuma ukuba ngenene benza iilekese zekomityi ezele ngamagwebu.
Agasti 14, 2008 kwi-1: 35 AM
Ndikhumbula xa i-starbucks iqala ukuza apha. Kwakukho iivenkile ezininzi ezincinci zokumisa ukuze ufumane ikofu kunye nesandwich, kwaye zayeka ishishini.
I-Starbucks yayimalunga nokuthengisa kunye nokuxhatshazwa. Buza nawuphi na kubahlali baseNew Hope, PA ukuba baziva njani xa i-starbucks yonke kodwa benyanzelwa ukuba baphume kwivenkile yabo yengingqi ukuze babonelele abakhenkethi kunye neendwendwe.
I-starbucks iphumelele ngokulungiselela abantu abafuna into eyahlukileyo, ikhule ngokuziva iphezulu kwaye ikhethekileyo, emva koko banqumle umqala wabo ngokuyiyeka yonke into iye entloko. Ngoku yingxelo yefashoni kunye nenye ileyibhile yomyili.
Jonga nje inani lee-iPhones oza kuzibona zisetyenziswa apho, kunye nenani leengxowa zomyili, kunye ne-macbooks. Akuthathi xesha lide ukufumana uninzi lwabantu luya apho ukuze lubonise indlela abapholile ngayo. Abaninzi bebengayi kuyazi i-espresso efanelekileyo okanye i-cappuccino ukuba i-barista eselula enetalente eneenwele eziluhlaza kunye nokugqojozwa yayiphosa ebusweni babo ngenxa yokuba nesitayela esicaphukisayo.
Agasti 14, 2008 kwi-8: 52 AM
Elinjani ibali elimnandi - into abaqhubi beevenkile kufuneka benze ufundo olufunekayo kubasebenzi babo.
Andizange ndifumane incasa ye-Starbucks, ndikhetha ukuthoba i-$1.50 ngekomityi enkulu yekofu eqhotsiweyo ye-Panera yesonka. Kwakhona, iPanera ayihlawulisi ukufikelela kwi-intanethi, isenza iivenkile zabo zibe yeyona ndawo ifanelekileyo yokuxhoma.
Ngaba iPanera igqibelele? Hayi. Kanye njengeStarbucks bahamba rhoqo kubasebenzi kunye notshintsho lolawulo olunamanqanaba omgangatho ahluka imihla ngemihla.
Ndicinga ukuba yiyo loo nto ndikhetha ukwenza kwaye ndisele ikofu yam ekhaya.
Agasti 15, 2008 kwi-10: 38 AM
Doug, isishwankathelo esihle kakhulu endivumelana naso kumthengi kunye nomthengisi.
Ababini babantwana bam baye babarista (kungekhona kwi-Starbucks) kwaye lo ngumxholo oshushu onokuthi abo bangaphakathi kwinkampani bangakwazi ukuyiqonda. I-Starbucks (kunye nazo zonke iivenkile zekhofi) kufuneka zigxininise kumava apheleleyo. Kungenjalo, kutheni uhlawula amaxabiso aphezulu?
Aug 15, 2008 ngo-4:33 PM
ME: Owayesakuba ngu-SEATTLE STARBUCKS BARISTA
Iposti elungileyo Doug! … Kuyafana nase Seattle. Enkosi uthixo kuhlala kukho iivenkile “zokwenyani” zekofu ezikufutshane. Ewe, i-Starbucks inkulu kwaye ihlala ixakekile, kodwa inkonzo kunye nomgangatho wabo uhlala uhla.
Aug 15, 2008 ngo-10:37 PM
Uhlalutyo olulungileyo lwendlela i-brand yachithwa ngayo, kwaye ndiyakholelwa, ilahlekile. Bendibukele oku kwiminyaka embalwa edlulileyo. Yintoni eyayikhe yangamava eyenza ukuba i-Starbucks yahluke yalahleka njengoko ikhonkco liye laya lingenangqalelo kwindlela abaphathwa ngayo abathengi. Yaba yinto engenabuntu, eyona nto ithethwayo kukuqhuba. Ungaqhuba ngeMacDonalds kwaye ufumane ikofu. IStarbucks yayingaseyondawo "yesithathu".
Enkosi ngohlalutyo olubukhali.
Aug 16, 2008 ngo-2:38 PM
Ndiyi-barista e-Starbucks. Ndisebenze apho iminyaka emi-2 kwaye ndibala…usuku lwam lokugqibela nguMgqibelo olandelayo. Andipheleli nje ndiye esikolweni, kodwa ndiyagula ziiStarbucks. Ndingatshintshela kwivenkile ekwindawo endiza kungena kuyo isikolo, kodwa andinamdla kwaphela wokwenjenjalo.
Ndandiwuthanda umsebenzi wam. Ndandiyithanda ivenkile yam. Ndandikade ndiyithanda iStarbucks. Ndiqale kwivenkile entle yokwamkela iindwendwe eGresham, OKANYE. Kwakuxakeke ngokufanelekileyo, kodwa ndandisenalo ixesha lokwazi kwaye ndonwabele abathengi bam, kwaye ndandisenalo ixesha lokwazi nokonwabela abantu endisebenza nabo. Andisathethi ke ukuba umphathi wam wayengomnye wodidi. Emva koko kwafuneka ndenze utshintsho kwivenkile eVancouver, WA. EVancouver, ndisebenza kwivenkile edume kakubi “ehlala ixakeke ngokwenene” (ndiyifumana kuye wonke umntu endimxelela ukuba yeyiphi ivenkile endisebenza kuyo). Uxakeke ngokwenene kukujongelwa phantsi kwaye singumfanekiso weStarbucks othetha ngawo kwinqaku lakho, kwaye ndonele. Kukho iivenkile ezinkulu zekofu zasekhaya, kwaye ndiyakonwabela ukuya kuzo kunokuba ndiye kwinkampani yam! Olu lusuku olulusizi kwi-Starbucks xa abasebenzi bakho bengakuniki ixesha losuku.
Ukuzithethelela kwam kunye nokwamanye ama-baristas e-Starbucks, sisebenza kakuhle noko sikunikwayo. Andizukuthatha uphondo lwam, kodwa emva kweminyaka emibini, ndiyi-barista enkulu. Ndiyazikhathalela iziselo endizenzayo kunye nabathengi endibanika zona. Ndithatha ixesha lokuncokola nabathengi bam kwaye ndibazi xa bekwifestile yam ye-drive-thru okanye kwikhawuntara yam ngelixa ndikwibar. Ndiyazi ukuba ii-baristas ezininzi ziye zathatha isimo sengqondo “sokujika-jika” kwaye balubekele bucala uthando lwabo lomsebenzi, kodwa abaninzi abakawenzanga kwaye ngabo ababambe okushiyekileyo kwe-Starbucks kunye.
Ngokwam, ndiphulukene nokholo nothando lwam nge-Starbucks hayi nje ngokuba ivenkile yam iyivenkile etshileyo, kodwa ngenxa yendlela esiphathwa ngayo njengabasebenzi. Mhlawumbi yivenkile yam nje, kodwa imbi kakhulu apho kwaye ngenxa yayo kunye neevenkile ezinje, iStarbucks ibe yinqanawa ezikayo. Ndikwasebenza eRed Robin kwaye ndiphathwa kakuhle kakhulu apho. Enyanisweni ndiyawuthanda umsebenzi wam apho. Ndiyakuthanda ukusebenza kwaye kundenza ndibe ngumqeshwa ongcono ngenxa yoko.
Ndidlule kulo lonke uqeqesho kunye ne-groveling eyenziwa ngu-Howard Schultz ekuqaleni kwalo nyaka kwaye ekuqaleni ndandi-gung-ho, kodwa ndiye ndaphelelwa lukholo kwaye ndiye ndabhenela ekuyekeni umsebenzi wam ngokupheleleyo. Inqaku lakho lelinye ekufuneka alibone uSchultz. Emva koko mhlawumbi iyakuba yifowuni yokuvusa ayifunayo.
Feb 15, 2009 ngo-1: 18 PM
Uyazi ukuba uzixelela njani ukuba uyafunda kuba iincwadi zakho zesiqinisekiso zivulwe phambi kwakho? Kodwa ngenene ucofa kwi Khuphuka ukuze ufumane izithuba ezinomdla zokufunda?
Ewe, ndifumene eyakho kwaye kuye kwafuneka ndikubhalele ukukuxelela ukuba ndiyonwabele kakhulu. Ndiyinike oobhontsi phezulu, ukuze abantu abaninzi bahlangane nayo kwaye bayonwabele.
Meyi 20, 2009 kwi-5: 36 AM
Uyayazi into eye yandothusa. Ulunge kangakanani umgca weMc Cafe. Ikofu kaMc Donald ngaphezulu kwe-3 yeedola zekomityi ibonakala incinci.
Emva kokuyizama ndidakumbile kwaye ndisiya apho ngakumbi nangakumbi ngoku.